Kwụsị igbu Ihe Na-akpata Marketing | Martech Zone
Sunday, Eprel 7, 2013 Fraịde, Septemba 5, 2014 Douglas Karr
Mgbe nwata akwụkwọ choro ego maka nri ehihie nke ulo akwukwo, o nweghi ihe o bula nye ha ebe ego si. Agụụ na-agụ ha, ha chọkwara ego. Ọ bụghị naanị nri ehihie ụlọ akwụkwọ, ọ bụ onyinye ụmụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ, ngwaahịa ahụike, nkuzi, nlekọta ụbọchị, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndepụta nke mkpa enweghị njedebe na, na akụ na ụba ala, ọ na-aga n'ihu na-eto.
Onyinye maka ndị na-eso ụzọ
Mgbe ala ọma jijiji ahụ mere na Haiti mere, Intanet na-akọ banyere mkpa ego na anụ ahụ niile mba ahụ chọrọ. N’oge ahụ, enweghị m ahịa. Abụ m otu nna na-enweghị nna, ego anaghịkwa aba ụba. Ma ihe ahụ merenụ wutere m M kwuru na m ga-enye ego ma ọ bụrụ Agara m ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nke ndị na-eso ụzọ na Twitter.
Nzụlite ahụ dị ozugbo. Ndị mmadụ tiri mkpu na m bụ onye obi tara mmiri na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya m ime. O juru m anya nke ukwuu… M na-achọ ịbawanye ikike m na Twitter ma nke a yiri ka ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. M gaara ego na zụrụ mgbasa ozi na ọnụ ọgụgụ ọ bụla nke saịtị na-akwalite akaụntụ m ... ma kama m chere na nke a ga-aka mma ebe ọ bụ na ego ga-aga ndị chọrọ ya ọtụtụ.
Emechara m daa mbà. Enwere m ọtụtụ ndị mmadụ na-eti m ihe na m wepụrụ onyinye ahụ (ma nye onyinye ahụ, agbanyeghị).
Nke a ga-akwụsị.
Anọ m nso nso na CMO nke nnukwu ụlọ ọrụ gwara m na ọ ga-amasị ya inye ụmụ akwụkwọ onyinye na agụmakwụkwọ maka inye ha ọdịnaya na ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ha. Ndabere azụ ahụ bụ otu maka atụmatụ a… ọtụtụ ndị ọha na eze tiri mkpu na ụlọ ọrụ pusi ya na-erigbu ụmụ akwụkwọ ma ha kwesịrị inye onyinye na agụmakwụkwọ, agbanyeghị.
E nwere naanị otu nsogbu… ọ gaghị. Enweghị mmefu ego maka enyemaka na agụmakwụkwọ. Ọ nweghị ike ịnyefe ego na mmefu ego ya chọrọ ka ọ zaa ajụjụ yana itolite ego na ya. Ọ ghaghị itinye ego ahụ wee nwetaghachi ego na ego ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nwere mmefu ego ahịa ma nwee ike iji ya maka ihe ọ bụla - ọ bụrụhaala na ọ na - eduga na nsonaazụ azụmahịa. Ọ naghị agba ọsọ, ọ na-azụ ahịa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-enwe mmasị ịme ha abụọ
Kama nke ahụ, ọ na-aga n'ihu ịkwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ kwa Pịa, mgbasa ozi, ọdịnaya na usoro ndị ọzọ yana azụmaahịa ebe a gaghị ekwupụta aha ya n'ihu ọha. Ọ bụ ngụkọta ọnwụ. Ndị nkatọ na-emeso ụlọ ọrụ ya dị ka nnukwu anụ (ma na-emeso ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ka nnukwu anụ) na-egbu ahịa kpatara. Ego ahụ na-agara ụlọ ọrụ ndị ọzọ buru ibu kama ịnyere aka ebe a kacha chọọ ya.
Ndị ụlọ ọrụ na-azụ ahịa iji nweta uru, mana nke a apụtaghị na ha ekwesịghị ịchọta ohere iji nyere ndị dara ogbenye aka, ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ ndị nọ na mkpa. Kwụsị igbu ahịa na-akpata ahịa ma chọpụta na e nwere ọtụtụ ijeri dollar nwere ike iji nyere ndị kachasị mkpa ya aka - mana ụlọ ọrụ ahụ nwere ike itinye ya naanị ma ọ bụrụ na ha achọpụta na nloghachi na ego ahụ.
Kwụsị igbu ahịa.
Lee ụfọdụ ezigbo ihe atụ nke Ihe kpatara ire ahia
Nnukwu mkpachị soro ya rụọ ọrụ AdoptAClassroom.org ịchọta ndị nkuzi kwesiri ekwesi ma were klaasị nke nrọ ha juru ha anya. Vidio a, akụkụ nke nnukwu vidiyo akpata mkpọsa ahịa, - bụ nke mbụ n’ime ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme na ijikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dijitalụ, in-store, in-home, TV, radio and print.
Tags: ịmụta a klasakpata ahịanyerennukwu mkpachịmarketingnzubeebumnuche ebumnucheebum n’uchescholarships
“Ihe m na-ekwu bụ na anyị nwere naanị wiilba. Nke ahụ ga-abụ ihe. ” - Westley, AKA Onye Uche Pirate Roberts.
Gwa ndị nọ ná mkpa na ị ga - enyere aka mana ihe mbụ ị ga - eme bụ ka ị nweta nke gị anaghị enyere aka. Ọ bụghị ọrụ ebere. Ọ bụghị onyinye. Anaghi enye. Ọ bụ nrigbu. Ọ na-aba uru. Ọ na-azụ ahịa ịnyịnya.
Nke ahụ abụghị ezi ịhụnanya. Nke a na-eme kwa ụbọchị.
Nye onyinye na ihe kpatara ya. Nweta mpempe akwụkwọ ụtụ isi gị. Dee nkwupụta mgbasa ozi gị. Soro ndị ọrụ PR ha rụọ ọrụ iji hụ na ị nwetara okwu gị. Mee ya nke ọma.
Ma kachasị, mee ya maka HA, ndị nọ na mkpa. Mee ya n'ihi na ọ na-agụ obi gị agụụ. Emela ya maka uru onwe gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ROI kpọmkwem na 'mgbalị na-akpata' maka ndị agụụ na-ata ahụhụ ma na-ata ahụhụ ma na-ebe ákwá ma na-afụ ụfụ na mgbu na mmerụ ahụ, agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ, na-agagharị na afọ ọsịsa, mmiri na-egbu ọbara na ọdọ mmiri na otu uwe maka izu atọ, na-ekpe ekpere megide mkpebi ka mma ha mere ka ha gafee abalị n'abalị na ịpụnara mmadụ ihe ma na-eri mmadụ, ị gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ ya.
Nnukwu ụlọ ọrụ ndị isi ụlọ ọrụ emeela nke a ugbu a na mmefu ego ha. Gị “CMO nke nnukwu ụlọ ọrụ” na-agha ụgha gị ma ọ bụ na ọ bụ dumbass. O kwesiri ka eti ya aka ma puta ya. Ma ọ bụ ọ chọrọ ka ya na ndị ahụ metụtara merụọ ahụ. Ọ ga-agbanwe otu. Hel, anyi nwere obi uto ubochi na LM maka oge di otua. Anyi jizi ngwa oru anyi na onyinye anyi eweputa oge ma anyi n’a oru riri ndi obodo aka. Ohere Enterprises bụ ọkacha mmasị anyị.
Dee ederede. Zipu ekpere. Nye ụfọdụ mgbanwe n'akpa uwe. Ma ị naghị anwa ịnwa ịnweta ọnụọgụ ahịa ahịa weebụ na ndị ahịa ole na ole site na ịpịghachi ahụhụ na nhụsianya nke ndị ọzọ.
Not bụghị onye ohi. Not bụghị onye na-ere ahịa ojii. You're bụ dike m. Bụ otu onye n’ime ndị ndụmọdụ m. Obi gị dị ebe kwesịrị ekwesị. Amaara m nke ahụ. Ma ndị a bụ otu n'ime ọgụ m kachasị na oge m Denom U ụbọchị: inye ihe kpatara vs. ịbụ onye amara maka onyinye ahụ. Nke a bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ CRM ga-eji achịkwa afọ ole na ole.
Chọghị ihe niile ahụ dị mkpirikpi, ịzụ ahịa ịnyịnya sh * t. I nwere otu olu kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Have nwere anya m, nke ahụ na-ewe ọtụtụ ihe iji nweta. Ana m arahụ ụra ịgụ ọtụtụ nkwupụta okwu ndị ọgbọ gị. Kwesịrị inwe obi ike iji mee ka olu dị ka ndị ahụ 20 dị na elu karịa gị ma ị ga-ebugharị ugwu. Nke kachasị mkpa, ị nwere ọnụnọ iji gbanwee. Jiri onyinye gị, ọ bụghị gimmicks. DM New Media ga-aka mma na ogologo oge.
Na ụwa ga-abụ ebe ka mma.
- Bromance maka ndụ
Ok, @natfinn: disqus - nke a bụ azịza jọgburu onwe ya ma n'ezie ekwesighi ka m zaghachi. I meela ezigbo enyi m nwoke na mkparita uka. Echiche gị banyere azụmaahịa abụghị ihe nzuzu dịka ọ bụ nzuzu. M na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na nwere nde dollar Amawaputala - na ahịa mgbe nwere a mmefu ego maka inye onyinye ka charities, ma ọ bụ ihe ọ bụla ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ maka inwe a "laghachi na onyinye" na ha nwere ike ịlele. Mana anyi nwere ego maka ahia. Isi okwu ebe a bụ inwe ike itinye ego ahụ n'ime ọrụ ebere karịa azụmaahịa ọzọ nwere ike ghara ịbụ ọrụ ebere. Echiche gị bụ kpọmkwem nsogbu m na-ekwupụta - ọ bụ enweghị ezi uche. Ga - achọrịrị ọrụ ebere ị ga - enweta Ọ BTH
Ọ bụrụ na ị gaghị ege ndị na-agwa gị okwu maka ịnwale ya ntị ma ị gaghị ege m ntị, gbalịa inye $ 500 maka ndị metụtara Boston Marathon Bombers ma zụrụ m Gumballhead oge ọ bụla ha jiri okwu a, "iri ngarị." N'ihi na nke ahụ bụ ihe ha kpọrọ ngosipụta ihu ọma nke ihu ọha ma ọ bụ nkwado iji gbanwere ego.
Ndị ọrụ ebere anaghị enweta ihe ọ bụla mgbe ị nwara ụdị ụzọ a, ọtụtụ n'ime ha agaghị anara ya. N'ihi gịnị? Ha maara na ọ na-emepe ide mmiri nke ndị nyere onyinye na-atụ anya ihu ọma n'ọnọdụ ego. Ha na-etinye oge dị ukwuu n’iso ndị nyere onyinye karịa ihe kpatara ha. Ọ na-enyere ha aka ma na-eme ka ụzọ dị omimi, ihu ọma ndị gbara ọchịchịrị, nke daba n'ụdị nrụrụ aka. Mkpọlata slịl. Ọ bụ ya mere iwu ji megide ya.
Ndewo, a bụ m Nat Finn. BA na Okpukpe, BS na Azụmaahịa. Ndị ahịa ụlọ ọrụ nde mmadụ nde anyị nwere na ụlọ ọrụ ole - Sony, Samsung, Sealy, Mahadum Trump, TELEBrands - ndị sitere na 'As Seen on TV,' Russ Whitney (ndị ndị ahịa ha gụnyere “Papa m bara ọgaranya, papa m ogbenye.”) Robert Kiyosaki. , Ngwaahịa Star niile, (nke ngwaahịa ya gụnyere "Snuggie"), maara opekata mpe iji nye onyinye nke uru na-akpata. Ha zubere maka ya. O di nwute, n'ihi na eleghi anya mara uzo ahia nke ahia. Ha maara mmetụta ha ma mara ugboro ole ụdị ihe a na-eme. Ọ bụ ya mere m ji chere ka m zaghachi. Ọ dị m nwute na ihe omume ahụ jọgburu onwe ya.
Biko gụgharịa mkpebi gị na ire ahịa. I dikwa egwu. Chọta ọrụ maka ndị enyi. Na-emeghe ụlọ gị nye ndị nọ ná mkpa. Spare na-egbughị oge. Gị na ezigbo enyi gị CMO nwere ike ịme ọtụtụ ihe. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ok, m ga-anwale nke a ọzọ. Anyị enweghị AKW BKWỌ EGO. Anyị nwere ego. Ma ọ bụ na anyị ga-enweta nkwụghachi na ntinye ego na MUTETING BUDGET anyị ma ọ bụ na anyị apụ na Azụmaahịa.
Yabụ, ị ga - achọ ọrụ ebere anaghị enweta ihe ọ bụla. Aghọtara m. Ma mba, echeghị m echiche m. Ọ ga-akara m mma ịhụ ka azụmahịa na-arụ ọrụ na uru n'akụkụ ndị nọ na mkpa karịa.
Dị ka m ga - eme. Ahụla m ka ndị mmadụ zuru oke na ọnọdụ a.
Gini banyere obere PR na onyinye?
Ma ọ bụ Zombie ustjá. Chere ruo mgbe Bill ga-enweta nke ahụ!
Na-amasị m ọzọ n'ọnọdụ ebe a na ego azụ na ebe a bụ ihe mere…
Mylọ akwụkwọ ụmụakam nwere “Dining for Dough” n’azu izu ole na ole. Ọnọdụ dị mfe, gaa rie nri n'ụdị ụlọ oriri na ọ suchụ suchụ a na ụlọ oriri na ọ restaurantụ thatụ ahụ na-enye ụlọ akwụkwọ 10% nke ahịa niile maka mgbede ahụ. Si Doug si ele, nke a bụ otu ihe ahụ dị ka ụlọ oriri na ọ advertisingụ advertisingụ mgbasa ozi “bia rie anyị na ndị dị otú ahụ na ndị dị otú ahụ abalị na anyị ga-enye gị obodo akwụkwọ 10% nke anyị ahịa”. Na njedebe nke ụbọchị, ụlọ akwụkwọ ahụ na-enweta 10% n'agbanyeghị onye na-arịọ arịrịọ.
Ihe dị iche ebe a bụ otu ndị mmadụ si ahụta onyinye ahụ. Mgbe ụlọ akwụkwọ ahụ jụrụ anyị ego anyị, anyị na-asị “anyị hụrụ ụlọ akwụkwọ anyị n'anya yabụ ka anyị gaa nyere ha aka". Mgbe azụmahịa na-arịọ maka ya, anyị na-ekwu “na azụmahịa bụ nanị na-agbalị dịkwuo ahịa m na-eji m eyen akwụkwọ”. Na ngwụcha, otu nsonazụ ahụ bụ otu.
Aga m ekweta, ruo mgbe m gụrụ isiokwu a ma ghọta ụzọ ọzọ m ga-esi bee akwa. Ighaghachi azụ, kedu ihe dị iche na nwa akwụkwọ kọleji na-eji akpa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere akara na ya? Echere m bụ na gia ha nweela akara ngosi na ha anaghị enweta ego maka ya.
Nke ahụ bụ ezigbo nghọta dị ukwuu @ google-607b0d9455bf19307cf8bf2968785187: disqus - ị zuru oke, omume ahụ bụ otu ma echiche ahụ dị iche. Isi okwu a abụghị 'irigbu', ọ bụ n'ezie itinye ego dollar ahịa ebe ọ nwere ike ịlaghachi na ntinye ego. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ etu echiche anyị banyere azụmaahịa sirila gbanwee kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ nnukwu ihe inwe azụmaahịa na-etinye ego na ọrụ ebere. Onyinye dị oke egwu, mana inye onyinye anaghị enwe ego na ego. Yabụ… belụsọ na m bara ọgaranya na ego juputara, achọrọ m itinye ego ebe ọ ga-enwe nloghachi.